दशैंमा मासु कति खाने ? राति नखाँदा राम्रो -
दशैंमा मासु कति खाने ? राति नखाँदा राम्रो
मासु कति खाने भन्दा सामान्य जस्तो लाग्छ । तर, यो जटिल विषय हो । मासु खान नजान्दा शरीर धेरै रोगको घर बन्ने गर्छ । स्वस्थ शरीरका लागि स्वस्थ मासु अत्यावश्यक पर्छ, तर खाने मात्रामा नियन्त्रित नहुँदा समस्या निम्तिन्छ ।
शरीरको डाइजेस्टिभ पावर (पाचन क्षमता)अनुसार मासु चाँडो या ढिलो पच्ने हो । डाइजेस्टिभ पावर बढी भएका व्यक्तिले धेरै मासु खाएर पनि छिटो–छिटो पचाउन सक्छन् । तर, डाइजेस्टिक पावर कम भएका व्यक्तिले थोरै मासु खाँदा पनि पाचनक्रियामा समस्या आउन सक्छ ।
बिहान र दिउँसो खाएको मासु पच्न सजिलो हुन्छ । तर, राति सुत्ने समय भएकाले बेलुका मासु खाँदा पच्न मुस्किल पर्छ । राति मासु नखानु नै उत्तम हुन्छ ।
मासु धेरै खाँदा शरीरमा प्रोटिनको मात्रा बढी हुन्छ । बढी प्रोटिन हुँदा शरीरमा असर पर्ने कुनै रोग लागेको छ भने मासु खाने विषयमा नियन्त्रित हुनुपर्छ ।
रातो र सेतो मासुमा प्रोटिन तथा कोलेस्ट्रोलको मात्रा निकै अन्तर पर्ने भएकाले मासुअनुसार पनि पाचन मात्रा फरक पर्न जान्छ ।